वेलायत छाडेर नेपालमै कुखुरा पालेरै मासिक ३० लाख आम्दानी -
वेलायत छाडेर नेपालमै कुखुरा पालेरै मासिक ३० लाख आम्दानी
माघ ६, २०७८ माघ ६, २०७८ किसान आवाजLeaveaComment on वेलायत छाडेर नेपालमै कुखुरा पालेरै मासिक ३० लाख आम्दानी
कुरा करिब दुई दशकअघिको हो । विदेश गएर श्रम र सीप बेच्ने लहर चलिसकेको थियो । वरिपरिका साथी-सर्कल विदेश हेलिइसकेको, यता कुनै इलम नमिलेकाले उनलाई पनि त्यतैतिर जाउँ, जाउँ भइरहेको थियो ।
यस्तै मनोदशामा अल्झिरहेका उनलाई एक दिन बेलायतबाट आफन्तले फोन गरेर सोधनी गरे- के गर्दैछौं ?
उनी अर्थात् नेपाल फुड एण्ड मिट प्रोडक्सन कम्पनीका कृष्ण श्रेष्ठले धक नमानी गुनासो पोखे- खासै केही छैन । विदेशको चाँजोपाँजो मिले उतै जाने विचारमा छु ।’
आफन्तले उताबाट उकेरा हालिहाले-वर्किङ भिसामा बेलायत आऊ । मेरै रेस्टुरेन्टमा कामदार चाहिएको छ । यहीँ काम दिन्छु ।’
रोजगारीका लागि कुनै एक देश जाने सोचमा रहेका कृष्ण बेलायतबाट, त्यसमा पनि रेस्टुरेन्ट भएका आफन्तले नै बोलाएपछि उत्साहित नहुने कुरै भएन ।
‘बेलायतमा रहेका आफन्तले वर्किङ भिसामा आऊ, काम दिन्छु भनेपछि मेरो मन संसार नै जितेजस्तो गरी फुरुंग उड्यो,’ प्याजको पत्रपत्रजस्तो गरी बसेको स्मरणको एउटा पत्र उप्काउँदै उनले भने ।
बेलायतका लागि भिसा आयो । उनी आफ्नो परिवार र देशलाई छाडेर सात समुन्द पार गर्दै बेलायत पुगे ।
उनलाई लागेको थियो- बेलायत आइपुगेँ । अब धीत मर्नेगरी पैसा कमाउने छु । पूरा हुन नसकेका सपनालाई सरप्राइज दिनेछु ।
३-४ महिना त्यहाँ काम गरे । तर उनको उत्साह धेरै समय टिक्न पाएन । आर्थिक नोक्सानीका कारण आफन्तको रेस्टुरेन्ट बन्द भयो । भिसा पनि त्यही बेला सकियो । आपतमाथि आपत पर्‍यो ।
घन बजारेजस्तो उनका सपना मुर्छित् भए ।
‘आफन्तको रेस्टुरेन्ट बन्दको समाचार नेपालमा भएको भए एउटा सामान्य घटना हुन्थ्यो । तर आफ्नो भविष्यसँग जोडिएकाले टाउकोमा घन बजारेजस्तै पीडादायक भयो,’ कृष्णले बिर्संनलायक त्यो अतीतबारे खुलाए ।
त्यसपछि त उनको दुःख र कष्टको महाभारत सुरु भइहाल्यो । आफन्तले संरक्षण दिएनन् । अन्यत्र काम गर्न कानूनी जटिलता थिए ।
जीवनमा पहिलो पटक अति संकटले घेरा हाल्यो । उनी सडकमा पुगे ।
झण्डै सात दिन सडकलाई ओछ्यान र खुला आकाशलाई ओढ्ने बनाएको कृष्ण सुनाउँछन् ।
स्वदेशमा भए कसैले सोधनी गर्दो हो- बाबु के भएर सडकमा बस्यौं । तिमीले के खायौं ।’
तर त्यो बिरानो मुलुकमा उनलाई न कसैले केही खान दियो, न सोधनी नै गर्‍यो ।
धन्न, खल्तीमा पैसा थियो र सुत्नजस्तो समस्या परेन ।
झण्डै एक साता त्यसरी नै युकेको सडकमा गुजारेको र त्यसपछि चिनेका दाइहरूको सहायताले त्यो संकटबाट मुक्त भएर बेलायतमा ३ वर्ष संघर्ष गरेको कृष्ण सुनाउँछन् ।
त्यसपछिका दिनमा पनि उनी कहिले दुबई पुगे त कहिले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तान । अफगानिस्तानमा उनी ३ वर्ष बसे । यो दौरानमा भोगेका हण्डर, ठक्कर अनि भुक्तमान बेहिसाब छन् । व्यावसायिक सफलताबाट करोडौंका मालिक बनेका कृष्ण आफैंलाई अहिले ती संघर्ष सपनाजस्ता लाग्छन् ।
भनिन्छ, कोशौं गुल्टिँदा गुल्टिँदा खँदिलो बन्छ ढुंगा । मानवले भोग्ने हण्डर, ठक्कर पनि नदीमा ढुंगाले भोगेजस्तै एउटा गुल्टाइ रहेछ । त्यही गुल्टाइले उनको आँखा खुल्यो । उनी स्वदेशमा केही गर्ने सच्चाइ बोकेर झण्डै एक दशकको विदेशयात्रा बिट मारेर स्वदेश फर्किए । यो एक दशकअघिको कुरा हो ।
विदेशबाट फर्किए पनि सुरुमा कृष्णलाई पोल्ट्री (कुखुरापालन) को सोच फुरेकै थिएन । बरू उनलाई विदेशबाट चामल आयात गरेर नेपालमा बिक्री गर्ने भूत चढेको थियो ।
तीन वर्ष उनले भारतबाट चामल आयात गरेर नेपालीको भान्छामा पुर्‍याए । भोक मर्‍यो तर उनलाई खासै पोस आएन ।
त्यसको विकल्पबारे कृष्ण सोच्दै थिए । एक मनले भन्दै थियो, फेरि विदेश जाऊ । तर विदेशमा त्यति ठूलो भुक्तमान खेपिसकेकाले अर्को मनले यतै बस्न भन्यो ।
भाइले रामपुरमा जग्गा प्लटिङ गरेका थिए । बेलाबेला उनीसँगै टहलिन पुग्थे । त्यही क्रममा उनलाई त्यहाँ पालिएको कुखुराले लोभ्यायो । मनमा हुटहुटी जाग्यो- मैले पनि कुखुरापालन गरे कसो होला ?
मनमा टुसाएको त्यही सोचले छिट्टै आकार लियो । तर एक्लै गर्ने हिम्मत नै आएन । उनीजस्तै ३/४ जना मिलेर २ हजार ब्रोइलर कुखुरा खोर बनाएर हुले ।
पहिलो लटको कुखुराले खल्तीमा मुनाफा हालिदियो ।
केही समय साझेदारीमै यो काम अघि बढ्यो । पछि अलग अलग गर्ने सोच आयो । सहमतिमै उनीहरू छुट्टिए ।
दुई हजार बोइलर कुखुरापालनबाट यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनले संख्या बढाउँदै बढाउँदै लगे । अहिले खोरमा ६५ हजार लेयर्स छन् । आगामी दिनमा यसलाई अझै बढाएर एक लाख पुर्‍याउने सोच कृष्णको छ ।
‘अहिले मेरा फार्ममा ६५ हजार लेयर्स छन् । त्यसलाई अझै बढाएर एक लाखसम्म पुर्‍याउने सोच छ,’ फरासिला कृष्णले भावी योजनाको पोको सरक्क फुकाए ।
यही मेसोमा हामीले कृष्णलाई सोधिहाल्यौं- यो व्यवसाय कतिबाट सुरु गर्नु भएको हो ?
कृष्णका अनुसार, उनले सुरुमा १० लाख मात्र लगानी गरेका थिए । उनले पछि लगानी थप्दै गए । तर त्यही कुखुराको आम्दानीबाट ।
कृष्णले १० लाखको थैलीबाट सुरु गरेको व्यवसायको ढुकुटी अहिले कतिको भयो होला ?
प्रसन्न मुद्रामा कृष्णले हिसाब सुनाए- त्यही १० करोड जति पुग्यो होला ।
मिहिनती कृष्णले हासिल गरेको सफलता देखेर चिन्नेहरू अचम्मित छन् । अधिकांशले एउटै प्रश्न दोहोर्‍याउँछन्, फलानोले कुखुरामा गरेको लगानी डुबायो । तिलानो ऋणमा डुबेर परदेश भास्सियो । तिमीले कसरी छलाङ हान्यौं ?
तिनलाई कृष्णले दिने एक शब्दको सरल जवाफ छ- धैर्यता ।
कृष्णका अनुसार, केही हजार कमाउन विदेश जानै पर्दैन । त्यहाँ हुने कमाइ यही परिवारसँग बसेर सजिलै आर्जन गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि एउटा सर्त चाहिँ पूरा गर्नुपर्छ । सर्त छ-धैर्यता ।
‘धेरैको मनस्थिति हुन्छ कि लगानी गर्ने बित्तिकै करोडौं मुनाफा होस् । व्यवसायमा एकै पटक सफलता मिल्दैन । यसका लागि धैर्यता चाहिन्छ । धैर्यतासँगै काम गर्ने ज्ञान र सीप भए सफलताबाट व्यक्तिलाई कसैले अलग गराउन सक्दैन,’ कृष्णले आफ्नो सफलताको राज भेट टाइम्ससँग खोले ।
सफलताले धेरै मान्छे उन्मुक्त हुन्छन् । घमण्डले चूर बन्छन् । किसान पृष्ठभूमिबाट संघर्ष गरेका कृष्णले अहिले हासिल गरेको सफलता तरतरो हुँदै होइन । तर उनमा न कुनै दम्भ छ न बडप्पन । फरासिला कृष्ण शान्त छन्, नदीको तलाउजस्तै ।
सफल पोल्ट्री व्यवसायी कृष्ण सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति उत्तिकै सचेत छन् । आफूलाई ठूला व्यवसायीको पगरी गुथाउने पाप धर्मको प्रवाह नगरी पसिनामाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । तर कृष्णको भावना निकै फराकिलो छ । तल छुटेकालाई हात दिएर माथि उकाल्नुपर्छ भन्ने उन्नत सोच छ उनमा । त्यसैले उनी आफ्नो व्यस्त दैनिकीबाट केही समय निकालेर कुखुरापालक साना किसानको दैलो चहारिरहेका हुन्छन् । कसैलाई कुखुरापालनको व्यवहारिक ज्ञान बाँड्छन्, कसैलाई दाना बनाउने टिप्स दिन्छन् ।
‘साना किसानहरू ज्ञानको अभावले निकै ठगिएका छन्, उनले किसानप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुको कारण खुलाउँदै कुराकानीको बिट मारे, ‘मानिस हुनुको नाताले तिनको उत्थानमा भूमिका छ भन्ने ठानेर यस्तो प्रयास गरेको हुँ ।’
तीन दर्जनलाई जागिर
कुनै बेला रोजगारीका निम्ति आफैं विदेशतिर भौतारिएका कृष्णले अहिले झण्डै तीन दर्जनलाई इलम दिएका छन् । त्यसमध्ये ४-५ जना कार्यालयमा र बाँकी फार्म तथा दाना उद्योगमा काम गर्छन् ।
‘नेपालमा आफैंले युवाहरूलाई रोजगारी दिन पाउँदा निकै खुसी लाग्छ,’ रोजगारीका लागि कुनै समय भौतारिएको दिन सम्झिँदा अहिले कस्तो लाग्छ भन्ने भेटको जिज्ञासामा उनले प्रसन्नता व्यक्त गरे ।
त्यसो त पुगीसरी आयो भनेर कृष्ण आफैं पनि गजक्क परेर बस्दैनन् । ‘म मिहिनती मान्छे । केही नगरी उसै बस्न मनले मान्दैन,’ उनले सुनाए ।
पोल्ट्री क्षेत्रको कार्य प्रकृति नै त्यस्तै भएकाले उनी बिहानदेखि राति अबेरसम्म कार्यक्षेत्रमा खटिइरहेका हुन्छन् । ‘काम गर्‍यौं भने नै माम पाइने हो । त्यसैले म अल्छी नमानी बिहानैदेखि व्यस्त हुन्छु ,’ उनले सुनाए ।
प्रारम्भमा उनले ग्लोबल, पोषकलगायत कम्पनीको कम्पनीका दाना खुवाएर कुखुरा हुर्काए । ठूला बनाएर बजार पठायो, पैसा हातमा पर्दा हिसाब किताब बराबर । कहिले त अझै उल्टै नोक्सानी झेल्नुपर्ने ।
कुखुरापालन बालुवामा पानी हालेजस्तो भएपछि एक समय कृष्ण निकै दिक्दारिए । ‘मनभित्रै द्वन्द्व चल्थ्यो । एक मनले भन्थ्यो, कुखुरा पाल्न छाडिदिऊ । अर्कोले भन्थ्यो- केही नयाँ तरिका अपनाऊ,’ त्यतिबेलाको मनोदशाबारे कृष्ण बोले ।
यत्तिकैमा उनको मनमा एउटा जुक्ति फुर्‍यो-दाना पनि आफैं बनाउने । जुक्ति फलिफाप भयो । अहिले उनका खोरका कुखुराले अन्यत्रको दाना खानु पर्दैन । आफ्नै उत्पादनले हुर्किरहेका छन् । यति मात्रै होइन, झण्डै १५-१६ हजार साना किसानको मन पनि उनले उत्पादन गरेको दानाले जितेको छ ।
दाना आफैंले उत्पादन नगरी खरिद गर्दा कुखुरापालक किसानले धेरै मुनाफा आर्जन गर्न नसकेको कृष्णको बुझाइ छ । त्यसैले उनले अहिले साना किसानहरूलाई दाना बनाउने ज्ञान बाँडेर सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरिरहेका छन् ।
‘आफ्नै दाना बनाएर खुवाउँदा किसान लाभान्वित हुने भएकाले अहिले यो कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको छु,’ उनले भने ।
ठूलाले पेल्दा खिन्न
काठमाडौंका सडकमा वर्ग-विभेदका रोचक दृश्य बरोबर देखिन्छन् । बसले कार, कारले मोटरसाइकल र मोटरसाइकलले साइकललाई दपेटिरहेका हुन्छन् । धनीले गरिबलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै खोटो छ ।
ठ्याक्कै यस्तै प्रवृत्तिले पोल्ट्री क्षेत्र पनि ग्रसित छ । ठूला ठूला आदर्शका कुरा गर्ने घाघडान पोल्ट्री व्यवसायीले नै साना किसानलाई देखिनसहेको कृष्णको बुझाइ छ ।
उनका अनुसार मार्केटलाई आफ्नो पकडमा राख्न ठूला फार्मले दाना र अण्डाको भाउ तलमाथि गरिरहन्छन् ।
हजारौं कुखुरापालक किसानले झै भुक्तमान खेपेका कृष्णलाई यो दृश्यले आक्रोस पनि पार्छ, दुःखी पनि बनाउँछ ।
उनका अनुसार, केही समयअघि प्रति बाक्सा रु. २९५० मा अण्डा बिक्री भइरहेको थियो । तर ठूला कम्पनीले चलखेल गरेर २७०० मा झारिदिए । यस्तो हर्कतले आफैंले दाना उत्पादन गरेर कुखुरा पाल्नेलाई समेत टिक्न कठिन हुने उनको अनुभव छ ।
‘महँगो दाना खुवाएर किसानले कुखुरा हुर्काएर पालिएको हुन्छ । तर दाना र ह्याचरीले मूल्य घटाएर नोक्सानीमा पारिदिन्छन्,’ उनले साना कुखुरापालक किसानले ठूलाबाट झेलिरहेको समस्याबारे गुनासो गरे ।
बजारमा राजनीति चले पनि उत्पादन खपत नहुने समस्याचाहिँ छैन । उनका अनुसार उनले अहिले उत्पादन गरिरहेको अण्डा काठमाडौं खाल्डोमा सर्लक्कै खपत हुन्छ । बजारका लागि अन्यत्र जानु परेको छैन । लोकल र चिसो मौसममा उत्पादन भएकाले काठमाडौंका अण्डाको माग उच्च रहेको उनको हिसाब छ ।
अहिले कृष्णका फार्ममा ६५-७० हजार कुखुरा हुर्किरहेका छन् । अण्डा पारिरहेका छन् । यति ठूलो संख्यामा कुखुरापालन गर्नु सजिलो पक्कै छैन । तर कृष्णलाई अझै जोखिम मोल्नु छ । भन्छन्- अहिले ६५-७० हजारका हाराहारीमा कुखुरा छन् । आगामी दिनमा त्यसलाई बढाएर १-२ लाखसम्म पुर्‍याउने योजना छ ।
बर्डफ्लूको त्यो प्रकोप
ठ्याक्कै महिना त उनलाई थाहा छैन । सालचाहिँ भूकम्प गएको ०७२ हो । देशको कुनै ठाउँमा बर्डफ्लू देखियो । कुखुराको पर्याप्त बीमा नभएको र भर्खंर भर्खंर व्यवसायले लय पक्डिएकाले कताकता बर्डफ्लूको त्रास मनमा पसिसकेको थियो ।
कहिलेकाहीँ जेसँग मानिस डराएर भाग्छ, त्यसैले शिकार गरिछाड्छ । कृष्णको जीवनमा पनि त्यस्तै भयो । ५०-६० लाख रूपैयाँ बराबरको कुखुरा उनले मारेर खाल्डोमा हाल्नुपर्‍यो । हुनलाई सरकारले केही रकम क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएको होइन । लाखौं नोक्सानी बेहोरेका बेला त्यसले छोप लागे पो । तर अहिले अवस्था परिवर्तन भएको कृष्णको बुझाइ छ । सरकारले कुखुरापालक कृषकको हितमा निकै राम्रो काम गरिरहेकाले लाभान्वित हुन उनले सुझाए ।
राइजिङ हुन लागेको कुखुरापालन व्यवसायले धक्का खाएपछि कृष्ण निकै निरास भए । तर उनीसँग यो व्यवसायबाट भाग्ने सुविधा थिएन, किनकि, उनी पोखरीमा हेलिइसकेका थिए ।
त्यसपछि उनले निणर्य लिए, कुखुरा पालन गर्ने तर ब्रोइलर होइन, लेयर्स । जुन निणर्यले अहिले उनलाई फलिफाप भइरहेको छ । लेयर्स कुखुराले १८ महिनासम्म अण्डा पार्ने भएकाले यसको पालन गर्न नवप्रवेशीलाई उनले सुझाव दिन चाहेका छन् ।
(भेट टाइम्स मासिक बाट)
गेहेन्द्रको कृषिमा लोभलाग्दो लगाव
दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैया बढाउने तयारी
प्रधानमन्त्री ओलिले भने- गर्मीमा कोल्ड ड्रिङ्स होइन मोहि खानुस्
चैत्र १२, २०७७ चैत्र १२, २०७७ किसान आवाज
तिते करेलाको फाइदा, बेफाइदाहरु
बैशाख ३१, २०७८ बैशाख ३१, २०७८ किसान आवाज
कृषि अनुसन्धानमा धानको बीउ बिक्रि वितरण सुरु
बैशाख २८, २०७८ बैशाख २८, २०७८ किसान आवाज
ह्वात्तै बढ्यो कुखुरा मासुको भाउ?
बैशाख २८, २०७९ बैशाख २८, २०७९ किसान आवाज
विश्व गधा दिवस मनाइँदै, लोप हुने अवस्थामा गधा
बैशाख २५, २०७९ बैशाख २५, २०७९ किसान आवाज
अबकाशको दश दिनमै बरिष्ठ पशुचिकित्सक आचार्यको निधन
बैशाख २२, २०७९ बैशाख २२, २०७९ किसान आवाज
बाँकेमा विश्व भेटेरिनरी दिवस मनाइयो, पशु कल्याण सम्बन्धी कार्य गर्न जोड
बैशाख १७, २०७९ बैशाख १७, २०७९ किसान आवाज
आयात घटाउन बाँकेमा मसिनो धान खेती
बैशाख १६, २०७९ बैशाख १६, २०७९ किसान आवाज
कृषि ब्यबसायबाट बार्षीक लाखौंको आम्दानी
बैशाख ७, २०७९ बैशाख ७, २०७९ किसान आवाज
कृषि उत्पादनको बजारिकरणमा जोड
बैशाख ५, २०७९ बैशाख ५, २०७९ किसान आवाज
अध्यक्ष/ कार्यकारी सम्पादक : खगेन्द्र दाहाल
प्रबन्ध निर्देशक : रमेश क्षेत्री
सम्पादक : सुनिता पन्त
संवादाता : प्रदिप चौधरी, तिलक गाहा मगर
किसान आवाज प्रा.ली. नेपालगन्ज, बाँके
दर्ता न. १५७१४५/०७७/०७८
सूचना विभाग दर्ता नं. २५४५/ ०७७ –७८
मो. : ९८५८०३२१८२ ९८६६८४२४३३
मो. :९८५८०३२१८२, ९८५८०२२२८०
इमेल : :kisanaawaj1@gmail.com/
@Kisan Aawaj | Design By Ninja Infosys